एफएनसीसीआइको जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा भदौ १९ गते चुनाव हुने, को को छन् प्रतिस्पर्धी ? – Clickmandu
एफएनसीसीआइको जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा भदौ १९ गते चुनाव हुने, को को छन् प्रतिस्पर्धी ?
क्लिकमान्डु २०७४ साउन २६ गते १६:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रिक्त रहेको जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्षको लागि भदौ १९ गते निर्वाचन हुने भएको छ ।
महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले भदौ १९ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनको लागि भदौ १२ गते उम्मेद्वारी दर्ताको समय दिइएको छ ।
गत चैतमा भएको महासंघको निर्वाचनबाट जिल्ला तथा नगरको उपाध्यक्ष पदमा प्रमोद श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए ।
श्रेष्ठ स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी जिल्लाको बेनी नगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेद्वार बने । मेयरको निर्वाचनपनि उनले हारे ।
‘महासंघको विधान अनुसार उहाँको पद स्वत निलम्बन भएको हो,’ गोल्छाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘उहाँ आगामी दिनमा महासंघको कुनैपनि निर्वाचन लड्न पाउनु हुन्न ।’
श्रेष्ठले महासंघबाट राजिनामा नगरी मेयरको निर्वाचन लड्न गएका थिए । किशोर प्रधानम समुहबाट पदाधिकारी जित्ने श्रेष्ठ एकमात्र उम्मेद्वार थिए । उनले गोल्छा समुहबाट जिल्ला नगरमा उठेका दिनेश श्रेष्ठलाई हराएका थिए ।
‘आफु महासंघमा २ दशक बिताएको र साथीभाईले आग्रह गरेमा त्यसलाई मैले स्वीकार गर्छु,’ प्रधानले क्लिकमाण्डूसँग भने ।